नागरिकको निःशुल्क उपचारमा पालिकाले खुट्टा कमाउनु हुँदैन – Nuwakot Post
गृहपृष्ठ ∕ प्रदेश ∕ बाग्मती प्रदेश ∕ नागरिकको निःशुल्क उपचारमा पालिकाले खुट्टा कमाउनु हुँदैन
नागरिकको निःशुल्क उपचारमा पालिकाले खुट्टा कमाउनु हुँदैन
नुवाकोट पोष्ट मंसीर ८, २०७७ १०:१७
कोरोना महामारीको सुरुमा क्वरेण्टीन र आइसोलेशन बनाउने काममा व्यस्त पालिकाहरु अहिले विशेष गरेर जनचेतना जगाउने काममा निरन्तर लागिरहेका छन् ।
होम क्वरेण्टीन, होम आइसोलेशन, हेर्दा काम नगरेजस्तो तर महत्वपूर्ण काम भनेको त्यही हो । अहिले जति सङ्क्रमित छन् ती सबै अस्पताल जाने हो भने सम्भव नै हुँदैन । त्यसैले उनीहरुलाई होम आइसोलेशन, क्वरेण्टीनमा राख्ने, आत्मबल दिने, औषधि उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाउने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु पालिकाहरुले गरिरहेका छन् ।
यसबीचमा आवश्यक औषधिहरुको व्यवस्थापन गर्ने, कतिपय ठाउँमा पाँच बेडको कोभिड केन्द्रीत अस्पताल र कतिपय ठाउँमा आइसोलेशन केन्द्र निर्माण गर्ने काम भैरहेको छ । यसरी पालिकाहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेका छन् । नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधार र सङ्क्रमितहरुको संख्यालाई हेर्ने हो भने यति भयावह भइरहेको छ कि र पनि गाउँ-गाउँमा पालिकाको नेतृत्वले त्यो अवस्थालाई आत्मबल दिइ बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।
अहिले पालिकाहरुमा पनि एकरुपता देखिँदैन । तर मान्छे धेरै आउने जाने नभएका पालिकामा विद्यालय बन्द किन गर्नुपर्यो ? त्यस्तो ठाउँमा विद्यालय खुल्यो भने पालिकाले तलमाथि भयो भने विद्यालयले नै जिम्मा लिनुपर्छ भनिदिन्छ । यस्तोमा कसले खोल्छ ? विभिन्न विकल्प केन्द्र तहमा तय गर्ने र त्यो विकल्पको आधारमा आफू कुन विकल्पमा ठीक हुन्छ भनेर स्थानीय तहले छनौट गर्ने र त्यहाँको समुदायहरुलाई निर्णय गर्न लगाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
नीति योजना भन्ने कहिलेकाहीँ शतप्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ । कहिलेकाहीँ कार्यान्वयन गर्दा पचास प्रतिशत पनि सफल होला । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र यो वर्षको हेर्ने हो भने यो वर्ष निकै बढी भएको देखिन्छ ।
रोजगारी गुमाएकाहरुलाई रोजगार बनाउन अनुकूल कार्यक्रम र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । बेरोजगार भएका मानिसहरुको रुची केमा छ, उपलब्ध स्रोत साधन के छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्यो ।
हामीलाई रोजगारीसँग सम्बन्धित ज्ञान भएका विज्ञ तथा जनशक्तिहरु चाहिन्छन् । हामीले जनशक्ति पाल्न सक्दैनौं भने पनि अल्पकालिनको लागि भए पनि उहाँहरुको सहयोग लिनुपर्यो । यसो गर्ने हो भने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या पर्दैन ।
(गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग कुराकानीमा आधारित)
उज्यलोबाट सा भार